नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार
18th February 2020, Tuesday
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ ।
केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे बुझ्न आफूलाई केही दिन समय दिन’ माग गरेका थिए । तर, उनले मागेको समयावधि बितिसके पनि विधेयकलाई पारित गराउनेतिर कुनै पहल थालेका छैनन् । अधिकांश कर्मचारीहरूले विधेयक कर्मचारीहरूको हितविपरीत आएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरूले संघमा ४८ हजार कर्मचारी राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, मन्त्री त्रिपाठीले भने त्यो संख्या झारेर ३२ हजारमा सीमित राख्ने तयारी गर्दै आएका छन् । अहिले संघमा उपसचिव धेरै र शाखा अधिकृतहरू कम रहेका छन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीको संख्या धेरै हुनु र ठूला तहका कर्मचारीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रुचि नदेखाउनुका कारण पनि संघमा कर्मचारीको संख्या घटाउने अभ्यासमा मन्त्री त्रिपाठी लागेका हुन् । तर, कर्मचारीहरूले भने ४८ हजारबाट घटाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
यसरी नै विधेयकमा उमेर हदको विवाद पनि देखिएको छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । तर, कर्मचारीहरूले भने उमेर हद बढाएर ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नयाँ विधेयकले निवृत्तिभरण खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसमा पनि कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ । अब लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गर्ने नयाँ कर्मचारीहरूले निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरेको छ । नयाँ कर्मचारीहरूलाई पेन्सनको साटो उपदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीहरूकै तलबबाट १० प्रतिशत कटाएर अवकाश पाउने बेलामा उपदान दिने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा समेटिएपछि त्यस्तो प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
नयाँ विधेयकमा कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको औषधि, उपचार खर्चको व्यवस्था पनि हटाइएको छ । अहिले राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरूले २१ महिना र राजपत्रांकित कर्मचारीहरूले १८ महिनाको औषधि, उपचार खर्च पाउँदै आएका छन् । तर, प्रस्तावित विधेयकमा भने त्यो प्रावधान हटाइएको छ । कर्मचारीहरूका लागि सिभिल हस्पिटल निर्माण भएको र उपचार सुविधा पाउन थालेको भन्दै औषधि र उपचार खर्चको व्यवस्था विधेयकमा नसमेटिएको हो । तर, कर्मचारीहरूले यो प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने आवाज पनि कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाउने र आन्तरिक रूपमा बढुवाको व्यवस्था गर्ने कुरा समेटिएको छ । तर, कर्मचारीहरूले भने खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधानलाई कायम राखिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पालामा ल्याइएको संघीय निजामती विधेयक पारित नहुँदै उनी मन्त्रीबाट हट्न पुगेका थिए । नयाँ मन्त्री त्रिपाठीलाई यो विधेयक टाउको दुखाइको विषय बनेको बताइन थालिएको छ ।
सामान्यमा आफ्नै हात जगन्नाथ
हिमालयन बैंकमा होडबाजी
खरिपाटीमा ‘कोरोना’को त्रास
सीमा नाघ्यो बीएन्डसीको लापरबाहीले
अर्थसचिवको आँखा गभर्नरतिर
सभामुखमा अग्नि ः प्रधानमन्त्रीको इगोमा ठेस
क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?
नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र
राष्ट्रियसभामा कांग्रेस निल
बहुसंख्यकलाई चित्त बुझेन हेटौंडामा राजधानी
झन् पछि धकेलिँदै नेकपाको अभियान
सेनेटरी प्याडमा अर्थ बाधक
काठमाडौं । रोजेको आकर्षक ठाउँमा जाने इच्छा प्रायः सबै कर्मचारीको हुन्छ । कतिपय कर्मचारी त पहुँच नपुगेकै कारण वर्षौंदेखि दुर्गम र अनाकर्षक ठाउँमा बस्दै आएका छन् । वर्षौंदेखि घरपरिवारसँग टाढिएर बस्नुपरेको धेरै दर्दनाक पीडा छन् । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेका केहीले भने आफ्नो सरुवा पनि भनेको ठाउँमा आफैंले गरेर...
काठमाडौं । हिमालयन बैंकमा राणा, श्रेष्ठ, खेतान र पाण्डे समूहबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आज बुधबार हुने साधारणसभाबाट राणा र श्रेष्ठ समूहको एकाधिकार तोड्न खेतान समूह सक्रिय भएको छ । एन ट्रेडिड्र कम्पनी प्रालि झम्सिखेलका तर्फबाट अध्यक्ष बनेका मनोजबहादुर श्रेष्ठ र आभा इन्टरनेसनलन प्रालि थापाथलीका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी...
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मुलुक चीनबाट फर्काइने नागरिकलाई राख्न भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र छनोट गरिएसँगै कर्मचारीहरूमा आतंक मच्चिएको छ । चीनबाट फर्काइने नागरिकलाई राख्न तीनचार ठाउँबारे छलफल चले पनि अन्ततः खरिपाटीमा नै राख्ने टुंगोमा सरकार पुगेको हो । सो स्थान सुरक्षित रहेको हुँदा सरकारले क्वारेन्टाइन राख्ने...
फागुनबाट नेकपाको विशेष अभियान
पार्टी प्रवेश, ¥यालीदेखि जनसभभासम्मको योजना काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले फागुन १ बाट पार्टी एकता सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध विस्तार विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । खासगरी पाँचमहिने कार्ययोजनासहित बनेको विशेष अभियान मूल रूपमा तीन महिना विशेष रूपले सञ्चालन गर्ने नेकपाको तयारी छ । गत १९ माघमा सम्पन्न...
ढुंगे युगतिर डोर्याउने धृष्टता
केही दिनपूर्व, प्रदर्शनीमार्गको एउटा पुस्तक पसलको दराजमा सजाइएको एउटा पुस्तकमा आँखा प¥यो, जुन पुस्तक एकजना विदेशी लेखकले लेखेका थिए र जसमा उनले नेपालका हिमालीदेखि अरु भूभाग घुम्दाका अनुभवलाई उतारेका थिए । हरेक पुस्तक किन्दा छुट लिने बानी नै परिसकेको हुँदा पुस्तक बिक्रेतालाई सोधें, ‘यो पुस्तक किन्दा कति छुट पाइन्छ ?’...
तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
फोटोमा हारजितको फैसला
काठमाडौं । ‘तपाईंहरू यही हुनुहुन्छ तर तपाईंहरूकै फोटो राजारानीको जस्तो गरी राखिएको छ । यो फोटो राख्ने सामान्तवादी प्रवृत्ति हो । राजावादी प्रवृत्ति भयो । यो फोटो निकाल्नुहोस्, यसपटक सक्नुहुन्न भने अर्कोपटक नराख्नुहोला ।’ नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरह“दा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले उठेर यसरी कडा स्वरमा प्रतिवाद गरेपछि १५...
कुन पार्टीमा जालिन् शिवमाया ?
काठमाडौं । कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा रहेकी तत्कालीन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहम्फेले पार्टी केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा क्रियाशील हुने इच्छा व्यक्त गरेकी छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको गल्तीको सजाय आफूलाई दिन लागिएको भन्दै तुम्बाहाम्फेले आफूले गल्ती गरेको लिखित कारण पार्टीले दिनुपर्ने सर्त राखेकी थिइन् । सभामुखमा उम्मेद्वारी दिने...
वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...